Maalinta: Sebtember 2, 2017
Wasiirka Arimaha Gudaha Süleyman Soylu ayaa ka hadlay wadada “Erzincan - Railway Trabzon” iyo mashaariicda kale ee Trabzon. Wasiirka Süleyman Soylu wuxuu yiri iki labo sharci oo gaar ah ayaa loo soo saaray Trabzon. Jasiiradda maalgashiga Arsin [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Bursa, oo ruxeysa dhammaan jidadka taraafikada magaalada, ayaa dhammaystirtay isgoyska Fagaaraha Teferrüç, halkaas oo cufnaanta taraafikada ay kordhisay cusboonaysiinta khadka khadka fiilada. Duqa Magaalada Caasimadda [More ...]
Maanta oo ku taal Taariikhda 2 Sebtember 1857 Qandaraaskii ugu horreeyay ee qadka tareenka ee ugu horreeyay ee ku yaal Constanta-Chernovada (Bogazkoy) ee Rumelia ayaa la saxeexay dhismaha khadkan ayaa la soo gabagabeeyey. 2 Sebtembar 1908 shaqaalaha Tareenka isku xidha Tesaloniika iyo Kaniisadaha waa inay bixiyaan mushaharka iyo [More ...]